Iibhanki - ALinks
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eOstriya?
January 15, 2022 IShubham Sharma Ostriya , iibhanki, imali
I-Austria inokunikela kakhulu. Iingcali zendalo ziyakonwabela indawo entle, iintlambo ezichumileyo, imilambo ecwebezelayo kunye neentaba ezingqonge isixeko saseAspen. IVienna, iVienna, iSalzburg, iGraz, kunye neVienna zezona zixeko zihle e-Austria, nge
January 6, 2022 IShubham Sharma iibhanki, imali, Photshugo
IBanco de Portugal ligunya eliphambili lezemali ePortugal. Le bhanki yeyenkqubo yaseYurophu yeeBhanki eziMbindi (i-ESCB). Inkqubo yayo yebhanki iphezulu kwaye inikezela ngeemveliso ezintsha zemali. IPortugal lilungu le-European Union. Bajongana nenye yeefayile ze-
IiBhanki ezigqwesileyo eKazakhstan
January 5, 2022 IShubham Sharma iibhanki, imali
IKazakhstan, ilizwe elikuMbindi weAsiya nelizwe elalifudula liyiriphabliki yaseSoviet, linabela ukusuka kuLwandle lweCaspian ukuya kutsho kwiiNtaba zeAltai kumda osempuma weTshayina neRashiya. IAlmaty, esona sixeko sikhulu selizwe, kudala iyindawo yorhwebo, enezinto ezinomtsalane ezifana ne-Ascension
Iibhanki Top eBukumkanini Saudi Arabia
Disemba 23, 2021 IShubham Sharma iibhanki, imali, ISaudi Arabia
Ubukumkani baseSaudi Arabia baneebhanki ezingama-24 ezinelayisensi apho iibhanki ezili-12 zalapha kwaye ukuphumla kungamasebe eebhanki zangaphandle. Zonke iibhanki e-Saudi Arabia ziphathwa yi-Saudi Arabia Monetary Authority.
Disemba 21, 2021 UMaitri Jha iibhanki, imali
IVanuatu lilizwe elikuLwandlekazi olukuMzantsi Pasifiki elenziwe ziziqithi ezingama-80 ezinobude beekhilomitha ezili-1,300. I-scuba diving iyafumaneka kwiziqithi kwiingqaqa zekorale, kwimiqolomba engaphantsi kwamanzi. Kwaye kwaphuka njengeWWII yomkhosi we-SS uMongameli uCoolidge. I
Iibhanki eCape Verde
ICape Verde, ekwaziwa ngokuba yiCabo Verde, lichwebakazi kunye nelizwe elikwisiqithi kumbindi we-Atlantic Ocean, equlathe iziqithi ezilishumi ezinentaba-mlilo ezinomhlaba opheleleyo oziikhilomitha ezingama-4,033. Abantu baseCape Verde ngabemi baseNtshona Afrika.